चीन गहना बक्स निर्माण र कारखाना | Xintianda
उत्तम गहना बक्स उपस्थिति र महसुस मा बलियो कलात्मकता छ। गहना आफैंमा सुन्दरताको प्रतिनिधि हो। यदि तपाइँ उपयोग मूल्य र गहना को सुन्दर रूप लाई राम्रो संग देखाउन चाहानुहुन्छ, यो गहना प्याकेजि by्ग द्वारा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ। गहना प्याकेजि of्ग को कलात्मक प्रभाव मुद्रण टेक्नोलोजी द्वारा प्राप्त गर्न सकिन्छ, जस्तै तातो मुद्रांकन, तेल मुद्रण, स्क्रीन प्रिन्टि so र यति यूवी एक राम्रो विकल्प हो। विशेष उपस्थिति संग अद्वितीय र उत्तम गहना बक्स अक्सर उपभोक्ताहरु लाई आकर्षित गर्न को लागी एक तरीका बन्छ, र गहना बक्स स्वाभाविक रूप मा एक मौन विक्रेता बन्छ।
कस्टम फेसन गहना प्याकेजि P्ग पेपर गिफ्ट प्याकिंग दराज बक्सहरु
कस्टम हार/कान स्टड/औंठी प्रदर्शन गहना कागज उपहार बक्सहरु
कस्टम थोक लक्जरी उपहार प्याकेजि Dra दराज कागज बक्सहरु
घडी को लागी कागज उपहार बक्स
गहना बक्स डिजाइन र उत्पादन को मुख्य अंक:
1. हामी गहना को डिजाइन विशेषताहरु, जस्तै आकार, सामाग्री, शैली, ब्रान्ड कहानी र यति मा संयोजन गर्नुपर्छ। गहना को विशेषताहरु र व्यक्तित्व अनुसार डिजाइन गरीएको प्याकेजि better्ग राम्रो एकता र अखण्डता प्रतिबिम्बित गर्न सक्छ।
२. गहना बक्स को उद्देश्य मार्केटि serve सेवा र उपभोक्ताहरुको ध्यान आकर्षित गर्न को लागी हो। गहना बक्स को डिजाइन उचित स्थिति मा हुनु पर्छ। यो लक्षित ग्राहकहरु को विश्लेषण, लक्षित ग्राहकहरु को सौंदर्य आवश्यकताहरु लाई पूरा गर्न को लागी, र गहना को मनोवैज्ञानिक मूल्य बढाउन को लागी आवश्यक छ।
3. गहना बक्स को मुख्य कार्य गहना को रक्षा गर्न को लागी हो। सामग्री को चयन आकार, रंग, असर क्षमता र गहना को प्रक्रिया मा विचार गर्न को लागी आवश्यक छ। एकै समयमा, सानो आकार र गहना को विभिन्न आकार को कारण, गहना बक्स को डिजाइन भण्डारण र गहना को बोक्न को लागी आवश्यकताहरु लाई पूरा गर्नुपर्छ।
अघिल्लो: ढक्कन र आधार बक्सहरु
अर्को: सौन्दर्य बक्सहरु